Google Co-Omume: Ugbua Amamihe karịa ka I chere | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 17, 2013 Na Tọzdee, Septemba 24, 2013 Nikhil Raj
N’oge na-adịbeghị anya, m na-eme nnwale nke Google Search Engine Results. Achọrọ m okwu ahụ WordPress. Nsonaazụ maka WordPress.org jidere m. Google depụtara WordPress na nkọwa Siri ike nghọta Personal Publishing Platform:
Rịba ama snippet Google nyere. Ederede a bu ahụghị na WordPress.org. N'ezie, saịtị ahụ enyeghị nkọwa meta ma ọlị! Kedu otu Google si họrọ ederede bara uru? Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ chọtara nkọwa site na otu n'ime peeji 4,520,000 na-akọwa WordPress.
Elere m anya n'otu nsonaazụ ahụ.
Nke ahụ bụ Mmekọrịta na-arụ ọrụ!
Mmekọrịta bụ teknụzụ patented Google. Mmekọrịta nwere ike inyere ibe aka ịkọ maka okwu ndị na-adịghị na mkpado aha, ederede arịlịka ma ọ bụ ọbụlagodi ọdịnaya peeji. Nke a na - eme mgbe ibe ikike dị elu na - akọwa saịtị gị yana Google na - achọpụta mmekọrịta okwu na - eme ka algorithm kwenye na nkọwa ahụ ziri ezi karịa nke achọtara na saịtị ahụ n'onwe ya. Nkọwa a nwere ike ịnwe ma ọ bụ na-enweghị njikọ na-atụ aka na saịtị gị.
Na nke a Google ejirila nkọwa banyere WordPress dị na weebụsaịtị ndị ọzọ iji nye snippet!
Nke a bụ otu n'ime ihe mere anyị ji eme ka ndị ahịa anyị lekwasị anya n'ịdepụta ọdịnaya dị oke egwu ma dị ịrịba ama kama ilekwasị anya na isi okwu eji eme ihe. Ọ bụrụ na ị dee ọdịnaya dị ịrịba ama, Google ga-eji saịtị ndị ọzọ na-ezo aka na ọdịnaya gị iji chọpụta ihe nsonaazụ ọchụchọ iji tinye ọdịnaya ahụ n'ime… ma ọ bụ ọbụna ịmepụta snippet iji kọwaa ibe. Ọ bụrụ n'ị nwaa ịmanye ọdịnaya ahụ, na-eme ka ọ dị ntakịrị - ị gaghị ewere ọnọdụ maka usoro ịchọrọ.
Tags: ngalaba-currenakwukwoudogoogle ngalaba-omumegoogle +
Azụmaahịa na Ahịa Ahịa Ahịa